Nezvedu - Haidari Runako Technology Co, Ltd.
Yakagadzwa muna 2014, Haidari Runako Technology (Beijing) Co, Ltd inyanzvi inogadzira inotarisa kutsvagisa uye kugadzira Medical uye Aesthetic laser michina uye muchina wemaindasitiri muChina.
Haidari Runako kunyanya inopa CO2 fractional laser (yemadzimai uye yevhavha kurapwa, ganda remolding, ganda rejuvenation), Picosecond laser, Erbium laser (1550nm, 2940nm), laser slimming muchina, 808nm bvudzi kubvisa laser muchina, wekumaka muchina, nezvimwe.
Haidari Runako inopawo OEM neODM masevhisi anoenderana nezvido zvevatengi.
SeHaidari Runako sechikamu chebhizinesi rako, unogona kukurudzira nekupa simba kune vatengi vako kuti vasimudzire runako rwavo uye nekuvandudza kwavo hupenyu nehutano hwakachengeteka, hunofungidzirwa uye hunoshanda.
Kubvira payakagadzwa, kambani iyi yanga ichiomerera pamisimboti mina ye "mhando yekutanga", "mutengi kutanga", "sevhisi kutanga" uye "mukurumbira wekutanga". Tiri kutarisira kuvapo kwako pamwe nekushandira pamwe, uye kuita mubatanidzwa kuedza kwe laser chikonzero neChina yenyika indasitiri.
Iyo kambani ine boka remhando yepamusoro yemagetsi, yemagetsi uye nemazvo michina yekutsvagisa nyanzvi uye vashandi vekusimudzira, neyekunze epasirose yekuyera zviridzwa, inovandudza mashandiro ekugadzira maitiro uye akaomarara mhando manejimendi manejimendi, kuti uve nechokwadi chehunhu hwezvigadzirwa zvedu.
Iyo kambani inoshanda mukugadzira michina yemhando yepamusoro, yakasimba simba rehunyanzvi, kugona kwakasimba kugona, akanaka masevhisi masevhisi